Manuskript, inkqubo yokulungiselela iiprojekthi zethu zokubhala | Ubunlog
Manuskript, inkqubo yokulungiselela iiprojekthi zethu zokubhala
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iManuskript. Yi le isixhobo sokubhala esinokuyifumana ifumaneke kwinkqubo yoBuntu. Inkqubo ineempawu ezithile eziluncedo neziluncedo kubabhali esiya kuzama ukuzibona kule migca ilandelayo.
Njengoko benditshilo, iManuskript inemisebenzi eyahlukeneyo eqhuba kakuhle kwaye ukubonelela indawo elungileyo ukunceda ababhali yenza uyilo lwakho lokuqala, emva koko uwucokise umsebenzi wakho.
1 Iimpawu ngokubanzi zeManuskript
2 Faka iManuskript kwi-Ubuntu
2.1 Ukujonga ngokukhawuleza kwenkqubo
Iimpawu ngokubanzi zeManuskript
Iya kusivumela ukuba siququzelele iingcinga zethu kunye namaqhekeza ngendlela yokuma. Singazilungelelanisa ngendlela esifuna ngayo, okanye sizilungelelanise kubhabho.
Ine- Imowudi engenasiphazamiso.
Sebenzisa i Indlela yekhephu Ukukhulisa umbono wethu ngethoni ehambelanayo, kunye nabalinganiswa abantsonkothileyo, amacebo antsonkothileyo kunye nendalo yonke eneenkcukacha.
Yiyo Inkqubo yasimahla.
Phakathi kweelwimi ezikhoyo kukho Spanish.
Siza kuba nayo Ithuba lokudala abalinganiswa kunye nokukhulelwa kweeplani.
Siza kuba nakho ukukhetha ukwakha izkimuInkcazo kunye / okanye imowudi yeetab).
Iya kusenza sikwazi ukubona iifayile ze- umgca webali.
Siza kufumana ithuba bhala ngeetemplate kunye neendlela zokubhala eziyinyani okanye ezingeyonyani.
Iya kusivumela ukungenisa nokuthumela iifomathi zoxwebhu njenge HTML, ePub, OpenDocument, DocX kunye ngaphezulu.
Ezi zizinto nje ezimbalwa zale nkqubo. Banga bonisana nabo bonke kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Faka iManuskript kwi-Ubuntu
Le nkqubo ngelishwa ayizukufakwa ngaphambili kuyo nayiphi na inkqubo ye-Gnu / Linux. Ngethamsanqa, isicelo seManuskript siyahambelana nolunye usasazo. Ukwenza ukuba isebenze kwiqela lethu Ubuntu Kuya kufuneka sikhuphele iphakheji ye-DEB kwifayile ye- iphepha lokukhupha iprojekthi. Ukongeza, siya kuba nenketho yokusebenzisa i-wget kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) ukukhuphela iphakheji:
Xa ukukhuphela kugqityiwe, sinako qala ngofakelo. Ukwenza oku, kwisiphelo esinye kuya kufuneka wenze umyalelo:
Ukuba ngexesha lofakelo luyavela iingxaki zokuxhomekeka, njengoko ubona kwisikrini sangaphambili, sinokuyilungisa ngomyalelo:
Ekupheleni kofakelo, sinako qala inkqubo ukukhangela umthumeli kwiqela lethu:
Nje ukuba inkqubo ivule kwaye ikulungele ukusetyenziswa, siza kubona iphepha lasekhaya. Kuyo siya kufumana iindidi zokubhala esinokuthi sikhethe kuzo. Siya kuba nethuba lokuba khetha phakathi "Intsomi"Kwaye"Bubuxoki”Ukubhala esinomdla wokwenza.
Emva kokukhetha uhlobo lokubhala, sinokukhangela ukhetho "Ngexesha elizayo, vula ngokuzenzekelayo iprojekthi yokugqibela ngokuzenzekelayo”. Oku kuyakusivumela ukuba siqhubeke apho besishiye khona.
Emva kokucofa iqhosha "Yakha”Siza kusisa kwiscreen esilandelayo esiza kuqala ukwenza kuso. Ukuba sijonga icandelo "ngokubanzi”Kwibha esecaleni kwenkqubo kwaye siyikhetha ngemouse, siza kubona iibhokisi zombhalo ezininzi. Le mifanekiso yile; "Isihloko","Umxholo ongezantsi","series","Umthamo","Isini","Ilayisenisi","igama"Kwaye"iposi yasekhompyutheni", Sinokukwazi gqibezela iinjongo zombutho.
Emva kokumisela zonke iibhokisi zokubhaliweyo, into yakho iya kuba kukujonga icandelo "Isishwankathelo”Kwaye ucofe kuyo. Eli candelo lilapho Kuya kufuneka sigqibe isishwankathelo sokubhala kwethu.
Ngokucofa kwicandelo "Abalingiswa"siza kukwazi yenza abalinganiswa bethu, ukuba into oza kuyibhala inayo.
Inyathelo elilandelayo iya kuba kukukhetha "Izakhelo”Kwicala elisecaleni. Kuyo siya kuba nakho Gqibezela izakhelo ngokubhala kwethu. Kwicandelo "umhlaba"Siza kuba nokukhetha Gqibezela ibali lebali.
Ukuba sicofa icandelo "Inkqubo", Singa Gqibezela isishwankathelo sokubhala. Olu luhlu lunokukunceda ukuba uququzelele indlela oceba ukubhala ngayo ibali lakho.
Icandelo "Ukubhala”Kulapho sinokubhala khona imbali yethu, umsebenzi, inoveli, ibali elifutshane, njl.. Xa sigqibile ukubhala siya kufuna kuphela ukugcina umsebenzi wethu ngokunqakraza kwimenyu "Oovimba"Kwaye ukhethe"Gcina".
ukuba susa le nkqubo kwiqela lethuKuya kufuneka uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise lo myalelo:
Abasebenzisi abafuna ulwazi ngakumbi ngale nkqubo, banako dibana ne- iwebhusayithi yeprojekthi okanye yakhe Indawo yokugcina kwiGitHub.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Manuskript, inkqubo yokulungiselela iiprojekthi zethu zokubhala